Sida loo Demi Xiriirada ka Windows Phone si iPhone
Ka hor inta aan bedelan kartaa xiriirada ka Windows Phone si iPhone, waa in aan ugu horreeya oo dhan nidaameed dhammaan dadka ay khuseyso in ay kombiyuutarka. Halkan sidii ay u hagaagsan xiriirada ka Windows Phone si aragti si aannu markaa gali kartaa, kuwaas oo xiriir si aad iPhone.
1. Xiriirada Transfer isticmaalaya Muuqaalka iyo Wondershare TunesGo.
2. Mid ka mid ah Click si ay u gudbiyaan Xiriirada isticmaalaya Wondershare Mobiletrans.
Habka 1: Transfer Xiriirada isticmaalaya Muuqaalka iyo Wondershare TunesGo.
Qaybta 1. nidaameed Xiriirada Windows Phone in Outlook
Halkan sida ay si fudud u waafajinta aad xiriirka la leedahay in aad telefoon Windows leh aragti. Ka dhig ku hay in Windows Phone isticmaali doonaa Wi-Fi si hagaagsan xiriir si aan aad u baahan doontaa fiilooyinka USB for this mid ka mid ah.
Talaabada 1: Muuqaalka Open on your computer
Marka aad furay Outlook, guji tab faylka loo hormariyo ama guji Info. In qaybta account macluumaadka, guji account goobaha iyo raadiyo magaca nooca xisaabta. Waa in aad wax sidan oo kale;
Talaabada 2: Hadda waxaan u hagaagsan xiriirada aad
On telefoonka, guji bilaabatay ka dibna ku biiro liiska app iyo guji goobaha ka dibna xisaab Email. Riix account add saaran yahay ka dibna Microsoft account ama Windows Live. Ku qor macluumaadka aad login inay la soo wareegto in.
Halkan sida in aad nuqulka xiriir si aragti si fudud;
Dhinaca aragtida, guji file, ka dibna "dar xisaabta." Dooro tab "Gacanta reserved goobaha server ama nooc server dheeraad ah" ka dibna riix Next. Like this ...
In uu furmo suuqa soo socda dooro "Outlook.com ama sarrifka ActiveSync adeeg la jaan qaada" ka dibna riix Next. Tani waa in aad si daaqad halkaas oo loo baahan doonaa in aad magacaaga qor iyo email qaado. Marka aad qortey si guul ah, guji Dadka iyo qaybta xiriir la keeno.
Halkan, xulo dhammaan xiriirada aad u jeclaan lahaa in aan u hagaagsan oo aad telefoon iyo jiita in ay xiriir qaybta cusub. Like this ...
Haddaba telefoonka, guji goobaha ka dibna email + xisaabaadka
Tubada on account Microsoft ee sidoo kale loo yaqaan Windows Live ka dibna riix on nidaameed. Dhamaan xiriirada ku saabsan telefoonka waa hagaagsan oo kuwa on account aragti aad. Hadda waxaad haysataa nuqul ka mid ah xiriirada Phone Windows on Muuqaalka iyo hadda sii wadi kartaa in aad ku dhaqaajiyaan si aad iPhone.
Qaybta 2. Nuqul Xiriirada ka Outlook in aad iPhone
TunesGo Wondershare ka dhigayaa mid aad u fudud inaad maarayso xiriirada, music, sawirada iyo xitaa videos on telefoonka. Software Tani waxay awood u user inay si fudud u maareeyaan, dhoofinta iyo dhammaan xogta ay telefoonka ka mid fudud click, oo dhan in waqtiga dhabta ah. In la soo dhaafay, xogta ka mid phone wareejiyo mid kale uu ahaa hannaan adag dadka intooda badan, laakiin TunesGo Wondershare gelineya inaad si fudud tan loo sameeyo xataa haddii aad aragtid inaad wax ka yar bixio casriga ah. Wondershare TunesGo waa qofka ku daba xal marka aad rabto in aad dib-up xogta telefoonka qalabka aad, ku biiro ama xataa nuqul xog ku saabsan telefoonka.
Connect aad iPhone in aad PC via cable USB iyo abuurtaan TunesGo ah. In guddiga ay gacanta bidix, dooro "contacts". Tani waa in aan bilowno aad screen maamulka xiriirada. Dooro xiriirada ka mid ah liiska in aad rabto in laga keeno in aad telefoonka ka dibna riix "Dhoofinta / Import" badhanka dooran version ee Muuqaalka. Marka aad sameeyey aad doorato, aad samaysay. Hadda xiriir ah ka Windows Phone hadda waa in aad iPhone.
Habka 2: Mid ka mid ah Click si ay u gudbiyaan Xiriirada isticmaalaya Wonedrshare Mobiletrans.
Bedelka content dhexeeya Android, iDevice, WinPhone iyo Nokia (Symbian) 1 click.
Android, iDevice, WinPhone iyo Nokia (Symbian) xogta telefoonka ee kaabta in computer.
Taageerada 3000+ telefoonada socda Android, Nokia (Symbian) iyo macruufka.
Tallaabada 1: Dib ugu Soo Xiriir in ay OneDrive
On shaashadda bilowga telefoonka Windows ah, dusheeda hoos uga mari hormariyo All Settings kaabta. Saxiix in aad xisaabta Microsoft ka dibna dooro xiriirada in ay gurmad. Sida caadiga ah aad telefoon si toos ah dib doonaa xiriir si aad u account microsft aad.
Talaabada 2: Calaamad ku OneDrive iyo Connect iPhone
Ka dib markii furan Wondershare Mobiletrans on your computer, fadlan dooro Soo Celinta ka hayaan , soo qaado OneDrive ka fursadaha, Haddaba calaamadee ee xisaabtaada OneDrive. Connect aad iPhone in kombiyuutarka, Mobiletrans u aqoonsadaan doonaa sida telefoonka bartilmaameedka si toos ah.
Tallaabo 3: Ka billow beddelashada
Ka dib markii aad saxiixdo in xisaabta noo OneDrive, barnaamijka ayaa akhrin doono xiriirada ka OneDrive. Guji Just on Start Transfer, barnaamijka si deg deg ah ku wareejin doona oo dhan aad xiriirka la leedahay in aad iPhone.
Waa kuwee iPhone ayaad isticmaashaa?
Apple ayaa la sii daayo version cusub ee iPhone fursad kasta oo ay u hesho sida aynu wada isku dayaan in ay sii la casriyaynta oo cusub oo diyaar ku iPhone sii daayo dambeeyay. Waa kuwee ka mid ah ayaad isticmaashaa? Fiiri soo socda iPhone kala duwan iyo Xoolahoodii. Bal yaa og waxa laga yaabaa inay waqtiga u yar casriyayn ah.
1. iPhone 4: iPhone 4 ahaa kacaankii keligeed in marka hore soo baxay. Waxaa la iman bandhigay retina in uu leeyahay 326 pixels per inch ah. Taas macnaheedu waa in xal shaashadda waa 960 by 640 pixels. Waxay leedahay 32GB xasuusta gudaha iyo camera 5 megapixel ah in uu leeyahay illuminator kexeeyey ah. Waxaa sidoo kale uu leeyahay ee la dhisay awoodda video tafatirka iyo saamaxaya kuwa isticmaala inay wadaagaan video online si toos ah. Sidoo kale waa hore ee iPhone ee hore inay iska ilaawaan OS iyo dhaqaaqo macruufka.
2. 5 iPhone The: phone waxa uu yimid iyadoo la casriyeeyay 1136 by 640 xal. Waxa kale oo ka dhigaysa photos eegi ka khayr badan oo ay doonayeen ayay ku iPhone 4 sababtoo ah dareemayaal taabto lagu daro dhalada ee sida soo horjeeda ee iyada ka hooseeyey. Waxa uu isticmaalaa iOs6 ee la casriyeeyay oo 16GB in 64GB xasuusta gudaha. Waxay leedahay laba kamaradaha; gadaal 8 megapixel camera ah oo uu LED flash oo hore camera 1.2 megapixel ah.
3. 5s iPhone The: mid waxa uu leeyahay Qaraarka screen la mid ah iPhone 5. Waxaa sidoo kale yimaado oo la dhisay xusuustiisa 64GBand markii hadal batteriga oo ilaa 10 hrs ah. Waxay leedahay laba kamaradaha; a hore 1.2 megapixel iyo gadaal 8 megapixel camera. Laakiin laga yaabaa in waxa ay ka dhigeysaa 5s iPhone wax yar ka fiican yahay 5 iPhone waa faraha faaf touchID ah.
4. iPhone 6: la iPhone 6, Apple tegey khafiif ah. Waa mid ka mid ah telefoonada gacanta thinnest ee suuqa. Its screen xal ayaa la casriyeeyay si ay 1334 by 750 oo leh xasuus gudaha ee ilaa 128GB (iyada oo ku xidhan mid aad doorato.) Its camera ayaa shidma 8MP ah iyo kamarad 1.2 megapixel qaadataa photos HD wanaagsan.
5. iPhone 6 Plus: Tani waxay la mid yahay in ka badan oo phablet ah ka badan waa telefoonka. Tani phone 5.5 inch yimaado la 1GB ee RAM iyo 8MP gadaal kamaradaha soo food saartay. Iyadoo 6 iPhone Plus waxaad ka heli uu ka soo xusho version 16GB, version 32GB ah, version 64GB ama version 128GB (ku xiran tahay jeebkaaga, dabcan.) Waxay leedahay buuxa HD ah 1920 by 1080 bandhigay. Phone kani waxa uu isticmaalaa macruufka ee la casriyeeyay 8.1.1 kaas oo haystay oo dhan dhiqlaha soo maray ee qoraalkii hore go'an.
Wax kasta oo version aad hadda leedahay, aad haatan si fudud ka Phone Windows wareejin karaan xiriirada si iPhone ah. iPhone waa caan ay design oo quruxsan oo qaab ciyaareed cajiib ah in kastoo ay jiraan telefoonada fiican halkaas; racfaanka ee iPhone xaqa diiday inuu tago. Xaqiiqadu waxa ay tahay mid amaan ah in la saadaaliyo in ay jiraan waxaa laga yaabaa iPhone ah 7 ka soo baxay aad ugu dhaqsaha badan. Sidaas daawado meel this.
> Resource > Windows > Sida loo Demi Xiriirada ka Windows Phone si iPhone